TransportationPark na-echere ụmụ amaala ndị tụfuru ihe ha nwere - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliAtiongbọ njem na-echere ụmụ amaala ihe ndị ha nwere
14 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, ụgbọ okporo ígwè, General, Ụzọ Awara Awara, KENSİÇİ Rail Systems, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, tram 0
ulasimpark na-echere ụmụ amaala ihe ndị ha nwere
Tragbọ ala, bọs, na ihe echefuru echefu na Intercity Bus Terminal, nke TransportationPark A.Ş, na-arụ ọrụ na Kocaeli Metropolitan Municipal na-eche ndị nwe ha. UlasPark, nke na-echekwa kaadị amata echefuru, akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, kaadị ụmụ akwụkwọ, paspọtụ na obere akpa dị na kọbọd pụrụ iche, na-echere ụmụ amaala ahụ funahụrụ ihe ha. Ihe ndị furu efu 0262 325 23 05 www.ulasimpark.com.t bụ nwekwara ike jupụta ajụjụ site na ịjuju fọm na.
EGO NA-EGO NA-EGO
Ngwongwo ndị echefuru echefu na ụgbọ njem ọha na Kocaeli Intercity Bus Terminal, nke TransportationPark na-arụ, na-eche ndị nwe ha. A na-echekwa ihe ndị furu efu na Garage nke Gebze na Korfez, General Directorate of TransportationPark, Plajyolu. Citizensmụ amaala chefuru inye ohere nnweta ngwa ngwa 'ngwongwo ngwongwo furu efu guzobekwara TransportationPark, ndị mmadụ bịara nweta ngwongwo ha iji jupụta n'ụdị ngwongwo ndị furu efu ma si otú a na-edekọ ngwongwo ndị ahụ nyefere.
B QUESTR QUEST QUESTB FORR FOR SEBỌ NCHE
Na mgbakwunye, tupu edobe ihe ndekọ ahụ, a na-ajụ ndị tinyere akwụkwọ maka ngwongwo furu efu ụfọdụ ajụjụ. e.g. echefuru ego ole dị na obere akpa, agba nke nche anwụ (usoro), akpa ma ọ bụ pọọsụ site n’ịju ihe a hụrụ n’onye choro ngwongwo furu efu bụ nke ya iji gosi ma ọ bụ. Na ọkwa nke ọzọ mgbe egosichara, a na-enyefe onye ahụ ihe ahụ site na dejupụta fọm ahụ.
NWAANYI DARA ZABITA
Ationgbọ njemỌ bụrụ na ịnwe ihe echefuru echefu na njem ọha nke Park ma ọ bụ Kocaeli Intercity Bus Terminal, ị ga-ebu ụzọ kpọọ 0262 325 23 05 ma ọ bụ www.ulasimpark.com.t bụ Can nwere ike gbaa ajụjụ site na dejupụta fọm na. Edebere ụfọdụ n'ime ihe ndị furu efu na Kocaeli nọ na Ngalaba Ndị uweojii Ọchịchị nke Kocaeli. Enwere ike jupụta 153 na 0262 331 65 89.
TransportationPark Inc. Na-akpọ Nationals to the World na Line 250 14 / 02 / 2019 TransportationPark A.Ş., onye enyemaka nke obodo ndị dị na Kocaeli Metropolitan, na-ebufe ụmụ amaala ya na Sabiha Gökçen Airport na nchekwa, nke ọma na oge ya na Line 250. TransportationPark nwere ụgbọ ala ndị a mapụtara na Sabiha Gökçen na Kocaeli Intercity Bus Terminal ka ha wee ghara imeri ụmụ amaala. Ugwu ahụ, nke ndị obodo Kocaeli nwere mmasị dị ukwuu, na-aga n'ihu na ụgbọ elu 250 n'enweghị nkwụsị. AKWỤKWỌ BỤ N'ỤLỌ NCHE, MGBE MGBE NA OWU ỤLỌ TAA TransportationPark na-enyekwa tiketi tiketi na Sabiha Gökçen Airport, na-enye ụmụ amaala ndị na-arụ ọrụ na saịtị. 250 9, bụ nke bara uru ma dị mma ma jiri ya tụnyere ụgbọ elu ndị ọzọ ụgbọ elu, na-ebufe ụmụ akwụkwọ gaa n'Ọdụ na 15 TL. Ezigbo ụgwọ maka bọs XNUMXTL, ...
Etu esi achọta ihe echefuru na ugbo ala nke ebugharị na Istanbul 01 / 03 / 2016 Etu esi achọta ihe gi echefuru na ugbo ala nke ụgbọ njem na Istanbul: know mara otu esi achọta ihe gi furu efu n'ime bọs, metrobus, nkwụsị na ọdụ ụgbọ oloko na Istanbul? A na-ebunye ngwongwo ndị gọọmentị na bọs, metrobus, nkwụsị na ọdụ ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ ọrụ nke General Directorate nke IETT Enterprises na Goodlọ Ngwá Ọrụ Nchọta dị na ọnọdụ dị iche iche na 26 ma debe ya na Karaköy Found Goods Office. a na-eme nyocha n'etiti ihe ndị ahụ, a na-enye gị nzaghachi. Ngwa gị na-eche na sistemụ anyị maka ụbọchị 30 ma ị ga-enweta ozi ikpeazụ na njedebe oge. Biko Echefuola Istanbulbulkart…
Ọnụ ụzọ ụzọ ụgbọ ala Kadikoy-Kartal bụ 19. ichere ụmụ amaala n'ụbọchị ahụ 05 / 09 / 2012 Enwere ike ịchọta ebe ịnọ n'etiti 32 kilomita, 22 ọdụ na ọbụna ike nke ịga ọrụ n'ụtụtụ nke na-ebelata anya n'etiti Kadıköy na Kartal gaa na 16 nkeji. N'iji ya tụnyere ebe ndị Europe na-eme ihe nkwụsị, usoro Kadıköy-Kartal dị jụụ. Ọ ga-ekwe omume ị gafee nwa agbọghọ ahụ nke na-akwado nkasi obi nke ohere ahụ n'ụgbọala, na-agụ ya akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ, na ọtụtụ ndị na-ehi ụra n'oge njem ahụ. Ụmụ amaala kwetara na ụzọ ụgbọ ala dị ọcha, mara mma na ngwa ngwa. Otú ọ dị, nsogbu kachasị njọ ndị njem anyị na-ekwurịta bụ ihe isi ike na-abịaru metro akwụsị. Ndi edere nke ndi obodo na agwa ndi ochichi ka ha rute uzo di ala, ugbua ma o bu ndi ozo ...
Ihe nzuzo nke njem dị mfe site na Gebze ruo Istanbul 19 / 07 / 2019 Gebze Garage of TransportationPark A.Ş., onye enyemaka nke Kocaeli Metropolitan Obodo, na-arụ ọrụ dịka àkwà dị n'etiti Kocaeli na Istanbul. N'ịbụ nke dị n'ókè ala obodo abụọ a, ọdụ ụgbọ mmiri na-ebugharị ụmụ amaala na nchekwa, nke ọma na oge ịbanye na mpaghara Gebze, Çayırova, Darıca na Dilovası. Enwere ụgbọ ala 103 n'ime ọdụ ụgbọ mmiri Gebze na nkezi ndị njem 22 puku kwa ụbọchị na-erute ebe ha na-aga ngwa ngwa, n'ụzọ dị mma na nchebe na ụgbọ ala ndị a. Usesgbọ ala na-ebuga ụgbọ njem niile na Marmaray dị n’ókè nke Kocaeli na-emekwa ka ọ dịrị ụmụ amaala mfe iru Istanbul. VERBỌCH TH DB XRNUM NUMBNUMRNUM THB ProvidR Provid Na-enyefe ụmụ amaala ọrụ njem gbasara Misafir Guest Oriented Service Ulaşım, TransportationPark dị na mpaghara Kocaeli niile…
TCDD weghachite ihe onwunwe nke Atatürk 18 / 05 / 2012 Great Ndú Atatürk na National Mgba ụlọ ọrụ nke Ọchịagha-na ngwa na Ankara Train Station Building e ji mee ka ụlọ, Turkey State Railways (TCDD) na Gazi University a na-weghachiri eweghachi na imekọ ihe ọnụ. N'oge a na-ewu Baghdad Railway, e kenyere 'Ndagharị Ndagharị ıyla, nke e wuru na 1892, n'isi ụlọ ọrụ onyeisi ụlọ na ebe obibi kemgbe ogologo oge kemgbe Atatürk rutere Ankara na 27 December 1919. Nke kachasị mkpa nke 1920-1922 afọ ọ gbara àmà n'ime mkpebi na n'ime obodo. Ntinye aka nke nkwekọrịta na French na 1921, ntinye aka ntinye aka, mkparịta ụka banyere mmepụta nke nzuko omeiwu na 23 Eprel dị ka National Sovereignty and Children's Day karar
N'ulo onyonyo ugbo ala uzo di iche iche: Ibughari nke ihe puru iche na onu 14 / 07 / 2012 Code module: 840UH0014 Nhọrọ aha: Ụgbọ njem nke Ihe Pụrụ Iche na Ọdịdị Nkọwa: Nke a modul bụ ihe mmụta nke na-ewebata Gauge Measures by Transportation of Difficult to Transport (Special Goods). Pịa ebe a ibudata.
IETT na-ere ihe ndị echefuru echefu na ụgbọ ala ndị njem 19 / 03 / 2013 İETT Transportation Echefu ngwongwo na Car Sales Akpọlite ​​n'agbata ụgbọ ala na Istanbul tram, Metro, bọs na-akwụsị na ọ bụghị inweta ihe echefu na nwe bụ na a ọwara ụgbọ ala ibu 26 March 2013 Tuesday ga-eresị site ọha auction usoro. Ọtụtụ narị ihe onwunwe furu efu, gụnyere laptọọpụ, igwefoto, ekwentị mkpanaaka, yana ihe ndị dị ka eletrikiiki dịka ntụgharị, efere ụgbọ ala, uwe dịgasị iche iche dị ịrịba ama. İETT bọs na trams, ụzọ okpuru ala, tunnels ma chefuo n'ime ụgbọ ala ma na-kwụsịtụrụ kubie ume ngwongwo, Karakoy ebe ụmụ amaala na-chọrọ okushon ga-enwe ke usenubọk Tuesday, March 26 09.00 12.00 awa na ụlọ ...
Njikwa EGO; Gosipụtara ihe echefuola na Bus, Metro na Ankaray 03 / 06 / 2013 Njikwa EGO; Bus, Metro na Ankaray na echefu ihe ndị Ihe ngosi: echefu na ọha iga na Ankara, ahụ "abụkwaghị" dedirtti. Echefu ihe na-agụnye akwụkwọ, wallets, ese, iko, laptọọpụ, ma ọ bụ ọbụna eze na-ọbụna Chandeliers. Ihe ijuanya ngosi Ankara n'ịrụzu ọha iga azụmahịa onye furu efu onwunwe ụlọ ọrụ na General Directorate nke Ego bụ jijiji. Njikwa EGO; Bus, metro na ihe ngosi echefu na Ankaray. Ihe ndị echefuworo na bọs na-eweta na ụlọ ahịa furu efu. A ga-eziga ha na weebụsaịtị ma laghachikwuru ndị nwe ha. E nwere otú ahụ n'etiti ndị echefu echefu, ahụ "abụkwaghị" ụdị nke na-eme ka ị na-ekwu ... Chandelier na denture ha ...
Nkwupụta Obi Ụtọ: A ga-azụta akwa na ihe eji eme ihe (n'ihi na Ankara Metro na Ankaray Enterprises Security Security) 13 / 08 / 2013 Uwe NA ngwa ọnọde ga-zụrụ Ego General Directorate nke okporo ígwè usoro STATES Ankara Metro na Ankaray Business Security Personnel maka uwe na Ngwa enye oriri 4734 Mba ọ ga-ọdịda site na-emeghe obi dị ka 19 edemede nke Public Procurement Act. Ihe ọmụma zuru ezu banyere obi na-depụtara n'okpuru: Obi Registration Number: 2013 / 86491 1-Administration a) okwu: Police n'Ógbè Racecourse Avenue Blok No: 5 06330 YENİMAHALLE / ANKARA b) Telephone na fax nọmba: 3125071087 - 3125071330 c) E-Mail Address : ali.altuner@ego.gov.t ca) internet adreesị nke obi akwụkwọ nwere ike hụrụ ...
Nkwupụta Obi Ụtọ: A ga-azụta akwa na ihe eji eme ihe (n'ihi na ndị ọrụ nche na Ankara Metro) 11 / 02 / 2014 Clothing ihe ga-zụrụ na Ngwa Materials Ego General Directorate nke okporo ígwè usoro STATES Ankara Metro Business Security Personnel maka uwe na ngwa mma Ihe Procurement azụmahịa n'ikuku 4734 Mba ga-ọdịda site na-emeghe obi dị ka 19 edemede nke Public Procurement Act. Ihe ọmụma zuru ezu banyere obi na-depụtara n'okpuru: Obi Registration Number: 2014 / 8644 1-Administration a) okwu: Police n'Ógbè Racecourse Avenue Blok No: 5 06330. YENİMAHALLE / ANKARA b) Telephone na fax nọmba: 3125071087 - 3125071330 c) E-Mail Address: ali.altuner@ego.gov.t bụ atọ) obi akwụkwọ nwere ike hụrụ na internet ...
kaadị kaadị obodo efuola
Ụgbọaka ụgbọ ala Kocaeli Bus
ụlọ ọrụ furu efu
ụgbọ ala furu efu
Logbọ njemParkfuola ma hụta
Na-ebugharị ọhaneze TransportationPark
Etu esi achọta ihe echefuru na ugbo ala nke ebugharị na Istanbul
Ọnụ ụzọ ụzọ ụgbọ ala Kadikoy-Kartal bụ 19. ichere ụmụ amaala n'ụbọchị ahụ
Ihe nzuzo nke njem dị mfe site na Gebze ruo Istanbul
TCDD weghachite ihe onwunwe nke Atatürk
N'ulo onyonyo ugbo ala uzo di iche iche: Ibughari nke ihe puru iche na onu
Nkwupụta Obi Ụtọ: A ga-azụta akwa na ihe eji eme ihe (n'ihi na Ankara Metro na Ankaray Enterprises Security Security)
Nkwupụta Obi Ụtọ: A ga-azụta akwa na ihe eji eme ihe (n'ihi na ndị ọrụ nche na Ankara Metro)